Xarumaha Tareenka ee Xawaaraha Sare | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraXarumaha Tareenka Xawaaraha Sare
04 / 08 / 2019 06 Ankara, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Saldhigyada Tareenka Xawaaraha Sare: Tareen xawaare sare leh oo ka shaqeynaya inta udhaxeysa Eskişehir iyo Ankara iyo ka tagida Eskişehir ee 16.35 waxaa la geliyay joogsi bille ah 1 ee Polatlı. Haddii ay jiraan rakaab kugu filan, joogsi joogsi ayaa jiri doona.
Qiimaha Tigidhka Sare Heerka waa 25 TL 12 waa ka yar tahay 12.5. Carruurta da'doodu ka yar tahay 7 waxay geli kartaa qoyska iyada oo aan tigidh la siin. Qiimaha Internetku waa 35 iyo 17.5 TL. Waxaad tigidhada ku iibsan kartaa internetka adiga oo riixaya batoonka tikidhada sare.
Boos Deg Deg ah oo Tareen Waxa lagu samayn karaa telefoonka. Laakiin haddii aad ka fiirsaneyso inaad ballansato booska, waxaad u baahan tahay xubinnimo. Xubinnimada waxaa looga baahan yahay inay buuxiso TCDD - Internet - Foomka Ikhtiyaariga ee Shaashadda Diiwaangelinta.
Xawaaraha Xawaaraha Sare: Kaadhka buuxa ee loo yaqaan 'YHT Card' (oo loo dirayo Eskişehir iyo Konya) 385,00 TL, dhalinyarada yar yar ee loo yaqaan 'YHT Card 275,00 TL', Ankara-Polatlı 155,00 TL, dhalinyarada yar yar ee loo yaqaan 'YHT 130,00 TL', Eskişehir-Polatlı 180,00 TL, dhalinyaro Yay XT 150,00 TL
Tareenka Tareenka Degdegga ah 444 82 33 Iyada oo aan lahayn waxaad ka heli kartaa tikidhada tareenka degdega ah dhammaan magaalooyinka adigoon gelin eber ama lambar magaalada.
Bixinta Tareenka Dheeraad ah
Riix batoonka tigidhka,
Guji "Member Login" badhanka shaashadda,
Gali magaca isticmaale iyo lambarka sirta ah badhanka Galitaanka Galitaanka Internetka ee Gal Gal Riix "Gal" badhanka
Guji badhanka Booska Soo-galitaanka.
Liiska Hawlaha Xulashada Tareenka ee shaashadda imanaya, taariikhda la xushay, Tareenka, Saldhigga, Saldhigga Imaatinka, geli lambarka rakaabka oo guji batoonka 'GO'.
Wasaaradda Gaadiidka iyo Report Final Istaraatiijiyada Gaadiidka Master ee February 2005: 400-600 km ka gaadiidka rakaabka ee tareenada-xawaaraha sare ee maanta waa fursad ugu waxtarka badan. Gaadiidka Rakaabka ee gaadiidka dadweynaha ee tareemada-xawaaraha sare ee dabooli doonaa mudnaanta noqon lahaa hababka ugu muhiimsan ee siyaasadda gaadiidka iyo sheegaya in mustaqbalka nidaamka tareenka magaalooyinka aan qalad noqon doonaa.
Masaafada dheer ee Ankara-Izmir waxay ku saabsan tahay 587 mudo dheer iyo gaadiidka rakaabka ee wado saacado 8-9. Wadarta wakhtiga safarka ee u dhexeeya Ankara iyo Izmir waa agagaarka 3.
Baahida loo qabo dib-u-dajinta gaadiidka u dhaxeeya magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalkeenna sida Ankara-İzmir ayaa soo baxay. Iyada oo ku saleysan shuruudahan, mashruuca Ankara - İzmir YHT wuxuu ahaa ajandaha.
In mashruucan, Railway Line Ankara-Konya High Speed ​​ee xnumx'nc gaarey Afyon, laga bilaabo tuulada Yenice in km of line cusub tareenka ka Afyon Uşak oo gaarey iyada oo loo marayo Menemen ee xarunta Manisa ka kooban yahay wadada saadaalineysaa horumar line hadda .
Tani mashruuca dhexeeya-Afyon-daqiiqo Ankara 1 20 saacadaha u dhexeeya Izmir iyo Afyon, Ankara iyo Izmir, oo ay ku jiraan saacadaha 2 30 in daqiiqo, ayaa lagu wadaa in ay goor saacadood 3 50 ay dhacdo min xaqiijinta.
Qandaraaska waxaa loo sameeyay qaybta Polatlı-Afyon ee mashruuca, oo lagu soo daray barnaamijka maalgashiga. Masaafada iyo waqtiyada wadada marka loo fiiriyo mashaariicda:
Ankara-Izmir (via Manisa): 3 saacadaha 50
Ankara-Izmir (via Kemalpasa): 3 saacadaha 20
Qiimaha Tikidhada Sare:
ESKİŞEHİR - QAADASHADA KONYA - ESKİŞEHİR
TABABBARKA IYO HADAFAADKA WAXAY LEEYIHIIN HALKAN
SAAMEYNTA SAACADAHA LOOGU TALAGALAY:
SAAMEYNTA SAACADAHA KONIYA:
TALOOYINKA IYO XIDHIIDHA LAGU HESHO ANKARA - KONYA - ANKARA
WAXA LA LEEYAHAY ILAALINTA
Ankara K: 07.00-Konya V: 08.52 (Sincan K: 07.21 Muuqaal la'aan)
Ankara K: 11.20-Konya V: 13.10 (Meel aan Sincan-Polatli aheyn.)
Ankara K: 13.00-Konya V: 14.52 (Sincan K: 13.21 Meelna uma baahna polysty.)
Ankara K: 15.30-Konya V: 17.22 (Xinjiang K: 15: 51 Meel aan la daboolin)
Ankara K: 17.00-Konya V: 18.50 (Meel aan Sincan-Polatli aheyn.)
Konya K: 07.00-Ankara V: 08.50 (Nidaamka Polatli ma laha Xinjiang V: 08.29)
Konya K: 10.30-Ankara V: 12.15 (No post Polatli-Sincan posture)
Konya K: 12.15-Ankara V: 14.02 (Nidaamka Polatli ma laha Xinjiang V: 13.41)
Konya K: 16.00-Ankara V: 17.45 (Meela Polatli-Sincan)
ANKARA-KONYA-KARAMAN YHT + DMU XUSUUSNOW:
KARAMAN-KONYA-ANKARA YHT + DMU XUSUUSNOW:
Karaman K: 10.45 Konya V: 11.50 / Konya si loogu xiro gaashaanka 12.15
Karaman K: 14.25 Konya V: 15.31 / Konya si loogu xiro gaashaanka 16.00
Karaman K: 19.00 Konya V: 20.06 / Konya si loogu xiro gaashaanka 20.30
TABABAR LOOGU TALAGALAY DALKA ANKARA EE ESKİŞEHİR - ANKARA
Saacadaha dhaqdhaqaaqa ee ka socda ANKARA:
Ankara K: 06.45-Eskisehir V: 08.15 (Sincan K: 07.06 Polatlı K: 07.24)
Ankara K: 08.10-Eskisehir V: 09.40 (Sincan K: 08.31 Polatlı K: 08.49)
Ankara K: 09.10-Eskisehir V: 10.40 (Meel aan Sincan-Polatli aheyn)
Ankara K: 11.00-Eskisehir V: 12.30 (Sincan K: 11.21 Polatlı K: 11.39)
Ankara K: 12.45-Eskisehir V: 14.15 (Sincan K: 13.06 Meel ladhigay)
Ankara K: 15.00-Eskisehir V: 16.30 (Sincan K: 15.21 Polatlı K: 15.39)
Ankara K: 16.30-Eskisehir V: 18.00 (Sincan K: 16.51 Meel ladhigay)
Ankara K: 18.00-Eskisehir V: 19.30 (Sincan K: 18.21 Meel ladhigay)
Ankara K: 19.00-Eskisehir V: 20.30 (Sincan K: 19.21 Polatlı K: 19.39)
Ankara K: 21.00-Eskisehir V: 22.30 (Sincan K: 21.21 Meel ladhigay)
Eskisehir K: 09.00-Ankara V: 10.30 (Polatli V: 09.49 Mawqifka Xinjiang)
Eskisehir K: 12.45-Ankara V: 14.15 (Polatli maya post Xinjiang V: 13.54)
Eskisehir K: 18.15-Ankara V: 19.45 (Polatli maya post Xinjiang V: 19.24)
Eskisehir K.21.00-Ankara V: 22.30 (Polatli ha joogin Sincan V: 22.09)
VAGON TABABAR KA HORAYTA TALOOYINKA: Basaska Class, Fasalka Dhaqaalaha, Kafeteriya
Ankara-Istanbul High Speed ​​Tareen Project kuwaas oo foomamka marxaladda koowaad ee curdan Ankara-Afyonkarahisar soo gooyay. 28 December 2011 TCDD Agaasimaha Guud ee shirkadaha hindisada ayaa muujiyay xiiso weyn. 38 oo ka socda 26, oo iibsanaya qeexitaanka, ayaa dalbatay. Haddii kun bilyan oo 660 549 243 million pounds siiyey qiimaha ugu hooseeya ee jilicsan uga soo mashruuca lacag ku dhowaad ku abaal kun 714 432 200 million pounds.
duulimaadyo Ankara-Izmir hoos u dhigi doontaa saacadaha 3,5 ee tareenka High Speed ​​(YHT) ayaa lagu wadaa in ay u adeegaan ee 2015 mashruuca. line Ankara-Izmir YHT ee Izmir, mashruucu waxa uu gaadhi doonaa Afyonkarahisar 13 tunnel, viaducts iyo buundooyinka 13 189 waa la dhisi doonaa. Mashruuca ayaa hoos u dhigi doontaa 824 640 ee Kiiloomitir fog wadada kiiloomitir u dhexeeya Izmir iyo Ankara. Xiriirka YHT ee Ankara-Izmir waxaa lagu dhisi doonaa labo khadadood iyo ugu yaraan 250. Xnumx't qorsheeyay in ay galaan mashruuca adeega, ayaa muhiimad weyn u dhaqaalaha Turkiga. Qiyaas ahaan kunka kun ee 2015 ayaa la rajeynayaa inay ka shaqeeyaan mashruuca. Ka qayb qaadashada khadadka dhaqaalaha ka imaanaya howlgalka baabuurta, waqtiga iyo kaydka shidaalku waxay gaari doonaan 4 million pounds sanad walba. Qaybta Izmir-Afyonkarahisar ee qadka ayaa la qorsheeyay in la soo bandhigo sanadka soo socda. Dhameystirka mashruuca ayaa la filayaa inuu 700 milyan oo rakaab ah sannadkii.
Tareenada Xawaaraha Sare ee Adeegga Xawaaraha Sare
Waa maxay waqtiyada tababarka Ankara?
Wadada weyn ee Ankara-Izmir
Qiimaha tikidhada tareenka ee Eskisehir Konya
Waa maxay waqtiyada tababarka Eskişehir?
Qiimaha tikidhada sare ee Eskisehir-Ankara
Tareenka dhakhso u tababaran
Kharashka Tareenka Bilaashka ah
waqtiyada tababarka ugu dhakhsaha badan
Qiimaha tikidhada sare ee tareenka xawaaraha sare ee Konya Eskisehir
Waa maxay saacadaha tareenka ee Konya
qiimaha tareenka xawaare sare
Qiimaha Tikidhada YHT High Speed ​​Train